တစ်ဦး Killer လှိုငျးစီးလှုပ်ရှားမှုဓာတ်ပုံရယူခြင်းများအတွက်သိကောင်းစရာများ
အဲဒီမှာနေတဲ့ကြီးမြတ် surfing ဓာတ်ပုံရဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့ Mentawai ကျွန်းများလိုထူးခြားဆန်းပြားတည်နေရာလိမ္မာဓာတ်ပုံဆရာနှင့်အတူဓာတ်ပုံရိုက်ခရီးစဉ်ပေါ်သို့ကံကောင်းပါစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ မကြာခဏဖြစ်ပျက်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကမပါလျှင်သင်အခွင့်အလမ်းကိုတဖန်ပေါ်ထွန်းမပြုစေခြင်းငှါအဖြစ်တစ်ဦးလူသတ်သမားပစ်ခတ်ရတဲ့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်တာပေါ့။ ဒီနေရာတွင်သင့်ရဲ့ရေခဲသေတ္တာပေါ်မှာထိုင်သို့မဟုတ်အသက်အဘို့သင့်ရဲ့ Facebook profile ကိုဖြစ်လာမယ့်ကြောင်းကိုအံ့သြဖွယ်ဓာတ်ပုံရဖို့ကူညီပေးဖို့တချို့အကြံပေးချက်ကိုပါပဲ။
Up ကို Hooking
ဒါက surfer ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးကောင်းလှိုင်းပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖို့လုံလောက်တဲ့နီးကပ်လာပြီနှင့်ယူခံရဖို့တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာရိုက်ချက်ဘို့အကောင်းတစ်ပြောင်းရွှေ့ busting ရည်ညွှန်းဖို့အသုံးပြုဟူသောဝေါဟာရကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာဓာတ်ပုံတပုံအရည်အသွေးနှင့်အာရုံ၏ variable တွေကိုနေဆဲဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်သင်တက် hooking ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဂိမ်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဆရာရှာဖွေပါနဲ့အမြင်အာရုံအတွက်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏စောင့်ရှောက်လော့။ လှိုင်းတံပိုးပျောက် running ဖြစ်ကြောင်းဓာတ်ပုံဆရာနှင့်ထိုဆီသို့အပြေးနေကြရသောစစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါဝေးအပြေးလှိုင်းတံပိုးကို select မထားပါနဲ့။ ဓာတ်ပုံဆရာကိုရေ၌ရေကူးလျှင်သင်အန္တရာယ်မည်သူမဆိုရဲ့ဘဝချပြီးမပါဘဲသူ့ကို (သို့မဟုတ်သူမ၏) ကိုတကယ်နီးစပ်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးလှေ၌တည်ရှိ၏လျှင်နီးကပ်နီးကပ်များအတွက်လိုအပ်ချက်လျော့နည်းလည်းမရှိ, နှင့်ဓာတ်ပုံဆရာပြည်မှရိုက်ကူးတာဖြစ်ပါတယ်လျှင်, သမျှ-ရုံလှိုင်းအဘယ်သူမျှမစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုခက်ခဲများနှင့်သင်သည်တတ်နိုင်သကဲ့သို့မြင့်မားသောအဖြစ်ရှိပါသည်။ အမြဲတမ်းနောက်မှဓာတ်ပုံဆရာနေ့လယ်စာဒါမှမဟုတ်ဘီယာဝယ်ဖို့သတိရပါ။
အချို့သော surfers တောက်ပသောအရောင်အဆင်းကိုဝတ်ဆင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ပျဉ်ပြားမှရောင်ခြည်ဖြည့်စွက်၏စိတ်ကူးမှာ balk မယ်နေစဉ်, ကသောအခါဖြစ်နိုင်သမျှဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးအပေါ်ကိုကူညီပါဘူး။
တခါတရံမှာအရောင်ဆနျ့ကငျြဘ၏နည်းနည်းအုံ့ရက်လိုအပ်ကြောင်းဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်, တကလှိုင်းနောက်ကွယ်မှထံမှသေနတ်သောအခါအမှုန်ရေမွှားတစ်ခု whirlpool အကြားပေါ်လာအံ့သောငှါဘုတ်အဖွဲ့့တောက်ပအပိုင်းအစပါပဲ။ အရောင်တစ်နည်းနည်းရုံကင်မရာရှာသောသေးငယ်သောကှဲလှဲစေခြင်းငှါအနေဖြင့်တစ်ဦးအဖြူဘုတ်အဖွဲ့, အေးမြ mellow စဉ် whitewater အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းကိုခံရပေလိမ့်မည်။
အနက်ရောင်စိုစွတ်သောဝတ်စုံနှင့်အဖြူပျဉ်ပြားနှင့် Surfers များလွန်းဓာတ်ပုံများခေါ်ဆောင်သွားဖို့မထင်ကြဘူး။ အပြင်ကနေ Dane Reynolds က , သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အကြှနျုပျတို့ကိုကလုံးဝတောက်ပသွားကြဖို့သို့မဟုတ်သင့်ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အောက်မှာပေါ် Incredible Hulk တစ်မှုန်ရေမွှားရဖို့, ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်ရုံရောင်စုံအဖုအင်္ကျီကိုသင်သတိပြုမိနှင့်သင့်ဓါတ်ပုံကိုယူတဲ့အတွက်လုံလောက်ပါလိမ့်မယ်အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ရေးခွ၏ပုံပုံရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာနည်းနည်းကူညီပေးပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကခြေဆွံ့သောသူကိုကြည့်။
သငျသညျအစဉ်မပြတ်ဓာတ်ပုံဆရာဆီသို့ဦးတည်ခရီးသွားလာသင့်ရဲ့အလှည့်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ပယ်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုအရေးယူထံမှ surfing နေလျှင်, ဓာတ်ပုံဆရာ wont ပင်သင်ကလုပ်နေလုပ်နေအရာကိုသိကူညီဖို့ wont ။ ဓာတ်ပုံဆရာသင်တို့ရှိသမျှအချိန်တိုင်းသူတို့ကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အညီသင့်ရဲ့လှိုင်းတံပိုးကို set up ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြိုးစားတည်ရှိကြသူတို့ကိုယ်သူတို့ရွေ့လျားဖို့ပွင့်လင်းသောချုပ်စက်အပြောက်အတွက်, ဒါမှမဟုတ်ရုံလှိုင်းများ၏စည်အပိုင်းပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ရုံပျမ်းမျှ Joe surfer နေနှင့်များ၏ရှေ့မှောက်၌ကြီးမားသော slob လေကြောင်း huck ဖို့မသွားလျှင်,anice နှင့်တင်းကျပ်စွာပြန်လည် - ညာဘက်ဘေးရှိဓာတ်ပုံဆရာမှ entry ကိုနည်းတူကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ရုံတင်းကျပ်စွာစောင့်ရှောက်ခြင်း, ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, dude ကျော်စီးကြဘူး။
ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးမျက်နှာလုပ်မထားပါနဲ့။ သင်၏လျှာထွက်ကပ်မထားပါနဲ့။ '' ဥစ္စာတက် '' တစ်ဦးဆွဲမနေပါနဲ့တစ်ဦးလက်ခလယ်ကိုမပေးပါဘူး။ သင်၏မျက်စိပိတ်မထားပါနဲ့။
အဆီတစ်လိပ်ကိုသင့်အဖုအင်္ကျီအောက်မှာထံမှထွက်ကပ်ရှိသည်, နှင့်-bits ထိတွေ့ကြသည်မဟုတ်သေချာအောင်မထားပါနဲ့။ သငျသညျမဟုထိုကဲ့သို့သော bummer-လေးနက် wipeouts ကောင်းသောဓာတ်ပုံများအောင်ရဲ့ဓာတ်ပုံဆရာများ၏ရှေ့မှောက်၌တရား crash နှင့်ရှို့ပါ။
တစ်ခုဟောငျး Surfboard Refresh လုပ်နည်း
တစ်ဦးက Pro ကို Surfer ငွေဘယ်လောက် Make ပါသလား?
အသေးစားလှိုင်းတံပိုးတို့သည်များအတွက်အကောင်းဆုံး Surfboard ကဘာလဲ?
အကောင်းဆုံး Longboard Surfboard Choose လုပ်နည်း
Kanoa Igarashi: တစ်ဦးက Surfer ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိ
နည်းပညာများဖြင့်သာနှင့်ဘွန်း Polarized ဥပမာပြဿနာ
အခမဲ့ကျဆင်းလာခန္ဓာကိုယ် - အလုပ်လုပ်ခဲ့ရူပဗေဒပြဿနာ
ရပ်-Up ကိုရုပ်ပြဂျင်မ် Gaffigan မှစ. ဂန္ထဝင် Quotes
အဆိုပါ WNBA သည် NBA နှင့်အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ကနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
(အဘယျသို့ဂေါက်သီး Term နည်းလမ်ကြောင်း) Holed
ဆက်သွယ်ရေးတော်လှန်ခြင်းဒါက6Technologies ကမှာတစ်ဦးကမျှော်
20 Awkwardly Hilary အယ်လ်ဘမ်အဖုံးများ
ကလေးတွေကအဘို့အင်္ဂလိပ် Fingerplay သီချင်းများ
ငှက်ကုလားအုတ်ပြည်တွင်း - တကယ်လား? အဘယ်သူသည်သူတို့ကိုမွေးမြူ?
Henri Matisse '' ပန်းချီဆရာများ၏မှတ်စုများ '' ကနေကိုးကား
"Fantaisie aux Divinity Mensonges" Lyrics နှင့်ဘာသာပြန်စာပေ
Edinboro တက္ကသိုလ် Pennsylvania ပြည်နယ်၏အဆင့်လက်ခံရေး